बहराइनमा रहेका अधिकांस म्याग्देली सम्पर्कमै हु्नुहुन्छ | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home अन्तर्वाता बहराइनमा रहेका अधिकांस म्याग्देली सम्पर्कमै हु्नुहुन्छ
बहराइनमा रहेका अधिकांस म्याग्देली सम्पर्कमै हु्नुहुन्छ
२०७७, ४ बैशाख बिहीबार १०:३९
कोरोना भाईरसको सक्रमण बाट देखापरेको विश्वलाई नै भयभित बनाइरहेको कोराना भाइरस (Covid-19)नेपालीहरूको रोजगारीको लागी आर्कषक मानिएको मध्यपुर्वको देश बहराइनमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी सरकारको सूचना र निर्देशन अनुसार नै काम गरिरहेका छन् ।
नेपालीहरुमा संक्रमण फैलिन नदिन निरन्तर सामाजिकस सञ्जालमार्फत समेत अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा नेपालीहरू अबस्थामा र मोना बहराइनको योजनाको बारेमा मोना बहराइनका अध्यक्ष लोक राम्जाली मगर बेनीअनलाइनसँग गरेको कुराकानीको छोटो प्रस्तुती ।
बहराइनमा रहेका म्याग्दीहरूको अबस्थामा कस्तो छ?
धन्यवाद ,बेनी अनलाइन यो सुनैलो समयको लागि कोरोना भाईरस संसार भरी ठूलो आतंक मच्चाई रहेको छ। कोरोना भाईरसले दिनँहु मानिस मरिरहेका र संक्रमण दर पनि बढेको समाचार हरूपनि आईरहेका छन्।
चिनको वुहान भन्ने शहरबाट पहिलो पटक देखिएको यो कोरोना भाईरस छोटो अबधिमा संसारका सबै देशहरूमा पुगिसकेको र यसलाई कोरोना भाईरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण प्रयासमा बहराइन सरकारबाट यहाँ सपिङ मार्केटहरू,बिधालय,बिश्वबिधालयहरू,सामाजिक जमघट,जिम,सैलुन,होटल जस्ता ठाउँहरू कोहि कम्पनिहरू पनि बन्द भएको हुदाँ केही समस्या र चुनौती रहेको छ । र यो बहराइनमा रहेका म्याग्देली मात्रै नभएर संसारभरी रहेको हुदाँ यो (आफु नै आफ्नो लागि लडाइँ)भएको हुदाँ पहिलो सामान्य दिन भन्दा अहिले परिस्थिति केहि जटिल छ।
बहराइनमा नेपाली र म्याग्देली हरूको कति संख्या हाराहारी छ ?
मध्यपुर्वको यो सानो देश बहराइनमा पछिल्लो समयमा नेपालीहरू रोजगारीको लागि आर्कषक मानिन्छ । नेपाली राजदुतावासले केही समय अगाडी दिएको जानकारी अनुसार करिव २५ हजार नेपालीहरु रहेका छन् । संस्थागत तथ्याङ्क खोज्ने प्रयासमै छौ तरपनि, अहिलेसम्म बहराइनमा म्याग्देलीहरुको संख्या करिब १ हजारको हाराहारीमा रहेको हुनुपर्छ । यो अवसरमा हामीले बहराइनमा रहेका म्याग्देलीलाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध गर्दछौ । तपाईलाई समस्यामा परेको कुनै जानकारी हामीलाई प्राप्त भएमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौ ।
मुख्यरूपमा म्याग्देलीहरू कुन ठाउँमा बसोबास गर्छन्। के सम्पुर्ण म्याग्दीलेहरू तपाईंको सम्पर्कमा छन् ?
अगाडी पनि केही जानकारी दिइसकेको छु । म्याग्देलीहरुको सम्पर्कमा धेरै हुनुहुन्छ । हामीले संस्थागत सम्पर्कमा विभिन्न सहरमा बसोबास गर्नेहरुलाई नै सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयासमा छौ । बहराइन सानो देश भएकाले म्याग्देलीहरू सबै ठाउँमा बसोवास रहेको छ। बहराइनमा बसोवास गर्ने म्याग्देलीहरू मोना बहराइन सँग ९ सय ५ भन्दा बढी म्याग्देली सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सम्भवत हामीले यो सम्पर्क स्थापित गर्न सक्नु विश्वभर रहेका मोनाकै लागि ठूलो सन्देश पनि हुनसक्छ । हामीसँग भएको तथ्याङ्कमा केही सम्पर्कमा नहुनसक्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई हाम्रो यो अपिललाई स्वीकार गदैं सम्पर्कमा आउन अनुरोध गर्दछु ।
अहिलेसम्म कुनै म्याग्देलीलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ कि छैन् त? बहराइन कार्यरत अरू नेपाली सक्रमित भएका छन् ?
हालसम्म कुनै म्याग्देली लाई पनि कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको खबर छैन र सबै म्याग्देली सबै सुरक्षित छौ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौ । बहराईनमा कार्यरत नेपालीहरू २२ जना सक्रमण भएको जानकारी छ। १९ जना अस्पताल उपचारमै र ३ जना पुर्ण रूपमा निको भई डिस्जार्ज भएको छ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिएमा तत्काल चेकजाँच गर्न अनुरोध समेत गरिएको छ। म्याग्देलीहरुसँग हामीले दैनिकजसो सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयासमा छौ ।
मोना बहराइनले कोरोना प्रभाबित ब्यक्तिलाई सहयोग गर्ने कस्ता कस्ता योजना बनाएको छ।
कोरोना भाईरसको बिश्वमा माहामारी फैलिएको अबस्थामा बहराइन मा पुर्ण रूपमा लकडाउन नभएता पनि भबिस्य अझै ठूलो चुनैतीहरूसँग सामाना गर्ने पर्ने भएको हुदाँ हामिले खाधान्न केही मात्रैमा स्टोर गरेर राखेका छै।र हामिले दैबिक प्रकोप वा आकास्मिक सहयोग गर्ने लागि बिगतमा अक्षयकोष स्थापना गरेका छै।यस गम्भीर परिस्थितिमा भौतिक दुरी कम गरि सामाजिक दुरी सञ्चार माध्यम बाटै सबै एकजुट भएका छौ।
यो माहामारिबाट जोगिन बहराइन सरकारले के कस्तो नीति लिएको छ र अहिले सम्म कति जना कोरोनाको सक्रमण भएका छन्।
👉️ बहराइनमा पुर्णरूपमा लकडाउन नभएता पनि यसलाई कोरोना भाईरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण प्रयासमा बहराइन सरकारबाट यहाँ सपिङ ,बिधालय,बिश्वबिधालयहरू,सामाजिक जमघट,जिम,सैलुन,होटल(खाना पार्सल मात्र) जस्ता ठाउँहरू कोहि कम्पनिहरू पनि बन्द गरेका छन।
👉️ सामाजिक दुरू कायम गर्ने सार्वजनिक स्थान जाँदा अनिवार्य माक्सको प्रयोग गर्ने नलगाएको खण्डमा कार्वा्हि गर्ने।
👉️अत्यावश्यक बाहेक आवागमन नगर्ने,सकेसम्म जमघट नजाने सार्वजनिक यातायातको सकभर प्रयोग कम गर्ने।
👉️ बहराइन सरकारले सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रहरी परिचालन र विभिन्न भाषाहरूमा कोरोना बिरूद जनचेतना दिईरहेको छ।
👉️सामान खरिद बिक्री गर्दे विद्युतीय भुक्तानी मा जोड दिने।
विश्व लाई नै भयभित बनाएको कोरोना भाईरस (Covid-19)लाई पराजित गरी स्वस्थ,समृद्ध र सुरक्षित विश्व निर्माणमा तपाईं हामी सबैलाई सफलता मिलोस्। नयाँ बर्ष २०७७ सालको को हार्दिक मंगमय शुभकामना साथै सुख,संमृध्दी र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
Previous articleकोरोनाविरुद्ध अग्रपंक्तिका योद्धाको कथा : पिपिई जोगाउन २४सै घन्टा ड्युटीमा डाक्टर र नर्स
Next articleमोना स्पेनले बेनी अस्पतलालाई बाईप्याप मेसिन सहयोग